Ukunikeza Commercial for Ukukhangisa
Commercial sipho Ukukhangisa inhlangano idokhumenti anikezelwe ukukhiqizwa, ukudayisa noma ukuhlinzekwa kwezinsizakalo, okuyinto efomini lemukelekako kakhulu uchaza Timiso okungenzeka ngokubambisana neNhlangano amakhasimende ayo kanye nabalingani ukhathazekile.
Umsebenzi we-kunikezwa ukwandisa inzuzo ngokuthengisa lalineseluleko emakethe izimpahla noma amasevisi. Noma yimuphi kucashunwa, ikakhulukazi ukuheha amakhasimende amasha. Ukwazisa labo abangase babe abathengi mayelana nenkampani, izici izimpahla kanye ezihlinzekwa ke, kubuye umsebenzi obalulekile, kodwa hhayi kakhulu.
Ukunikeza ukukhangisa, eqinisweni, yilokho lesibonakaliso sokuqala ukuthi uyakwazi ukunqoba phezu abathengi ezingaba imikhiqizo yenkampani. Ngakho-ke akuyona kakhulu nesibopho iyiqoqo le dokhumenti kuyadingeka ukuya esiteji ukuhlela khona ukuloba kwakhe.
Okokuqala, udinga sibeke inhloso iziphakamiso eyinhloko inkampani ofuna ukuwudlulisela kumakhasimende angaba namandla eyakhishwa inhlangano zokukhiqiza. Ngokungangabazeki, isinqumo esifanele uyohlale ukukhetha njengoba umgomo oyinhloko ugqozi amakhasimende ukuthenga.
Nokho, ngaphandle nje umgomo oyinhloko kufanele basingatha kanye nemisebenzi olucacile. Ukuze wenze lokhu, ungakhohlwa ucacise ulwazi olulandelayo kokuxhumana, okufanele ngempela iqukethe noma yikuphi sipho ukukhangisa. Iqhinga omuhle ukusebenzisa kompredlozheniyah usuku ulwazi ukukhuphula kanye izibuyekezo inkampani.
izimpahla esiqondile nezinkonzo ezidingekayo ukwethula ezimibalabala hhayi kuphela, kodwa futhi imininingwane, ngoba kunika ulwazi lemininingwane mayelana nokuthi sipho inesisindo emehlweni ikhasimende futhi usenza simethembe ngokwengeziwe.
Uma, ukwenza isibonelo, bakha isiphakamiso kwezentengiselwano inkampani ukwakhiwa ke ukuphrinta ngempela kwakudingeka kule ncwadi nge logo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba uqinisekise ukuthi idokhumenti wabheka kulula ngangokunokwenzeka, emfushane, zithwesiwe ihluzo ezingadingekile nombhalo.
Noma yimuphi quotation ukwenza ukuhlinzekwa kwezinsizakalo noma ukuthengiswa kwempahla kumele sibe nesihloko, amagama ngokwabo "Ukunikeza" ngokuvamile awacatshangwa njengoba isiqu esinjalo. Lena ukungasebenzi kahle. Futhi uninformative. Ngokuvamile, isiphakamiso esinjalo kuphela zishukumisa zingashayisani nabo ekutadisheni abantu, kodwa imbangela ephambene yini isifiso sokubatshela wazibeka "sikaphalafini emuva."
Kunalokho hackneyed "sipho commercial" kunengqondo ukusebenzisa amagama anjalo, okuyinto ukuveza iphuzu eliyinhloko lo mnikelo noma begqamisa izinzuzo ezihlinzekwa kumakhasimende.
Ekubhaleni isiphakamiso kuyadingeka ukuba banake leli phuzu, njengoba ukudalwa lezinkanuko. Lokhu kuphela azuzwe uma umbhalo kuba ngaphezu kokuvamile, khona ulwazi olusha futhi olufanele, futhi ngeke zithunyelwe kumuntu othize. iziphakamiso Faceless zivame bashiya elele phezu inqwaba amatafula imisebenzi yobubhalane, imisebenzi elinde amahora ayenazo mass.
Ukuze umamukeli ufundile isiphakamiso wathumela kuye kuze kube sekupheleni, abanye umfutho ukuze isenzo ubonile ekuqaleni idokhumenti. Njengoba isibonelo, lokhu kungaba yisandla sakhe kugcizelelani izidingo iklayenti ezingaba khona. Ngamanye amazwi, lo muntu kufanele ngokushesha ukwenza kucace ukuthi uyazi ngezidingo zakhe, futhi ngenxa yalokho bakwazi ukunikela izindlela eziqondile ukuzixazulula. Lezi zimfuneko ngokuvamile ukukhonza isidingo ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe, ukuhlonishwa neyaziwayo, lula umsebenzi wakho uvumelane, ukwandisa imali engenayo, ukusebenzisa amasevisi eliphezulu, ukuze ulondoloze isikhathi, njll
Futhi kuphela ke udinga ukuya okushiwo iziphakamiso echazwe umqondo wakhe, kwakha izinzuzo yangasese iklayenti ukhulume izindleko nemisebenti kanye netimphahla, ukucacisa inqubo.
Manje isipho ukukhangisa ingathunyelwa ngeposi ukuze wonke amakhasimende esizayo.
Incazelo mastic asphalt ubuchwepheshe
Hadfield izici steel: ukwakheka, ukusetshenziswa
Isigwebo sokufa e China. Ukuze noma yiliphi icala wanithwesa esifuze?
Nezixhumi Optical: injongo, izinhlobo, izici nezixhumi
«Aroma Rich» Iculo le-Cigarettes
Ezifuywayo UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki: ngezilayidi Red-eared. can lezi zilwane ngaphandle kwamanzi kanjani?
Nobuhle Caribbean. Sea - epharadesi emhlabeni
Izinhlelo ze-akhawunti yekhompyutha